Maitiro ekuisa RaspArch pane yedu Raspberry Pi? | Linux Vakapindwa muropa
Maitiro ekuisa RaspArch pane yedu Raspberry Pi?
Ini ndangobva kugovana newe nzira ye maitiro ekuisa Arch Linux ARM Muchigadzirwa chedu chidiki, kuburikidza neiyi nzira yekuisa isu takawana iyo system nekukurumidza. Kunyangwe chakasarudzika chete ndechekuti inoda kukwenenzverwa mukuda kwedu.
Kwandiri zvakakwana nekuti ndiri kuzvijairira kune zvandinoda, asi kune newbies kana vanhu vangotenga Raspberry Pi kuti ive yakachipa uye vanotarisira kunyaradzwa, Kuisa yakadaro sisitimu kunogona kukonzera kusiiwa kana kutamira kune imwe.
Ndokusaka nguva ino ini ndichaenda kugovana newe imwe yakakwenenzverwa vhezheni yeArch Linux yeRaspberry Pi uye yatove nenzvimbo yedesktop uye mafomu, akagadzirira kushandiswa.
1 Nezve RaspArch
2 Kuisa RaspArch pane Raspberry Pi
3 Uchishandisa RaspArch
RaspArch chiyeuchidzo cheArch Linux ARM, iyo musiki wayo Exton anowedzera mamwe mapulagini senge LXDE desktop nharaunda, PulseAudio, Firefox, Yaourt uye Gimp.
Inofanirwa kuiswa pane Raspberry Pi 3 Model B +, Raspberry Pi 3 Model B, kana Raspberry Pi 2 Model B komputa.
Iyo yazvino vhezheni yeRaspArch iri 180402 inozove iyo vhezheni yeRaspArch, mune iyi vhezheni vhezheni mugadziri wayo anopa iyo nzvimbo yekugona kuiswa mu SD yatove kubva kuWindows.
Kusiyana neshanduro dzapfuura, zvaive zvakafanira kuve nekuparadzirwa kweLinux kuti iiswe RaspArch pane iyo SD.
Kuisa RaspArch pane Raspberry Pi
Si iwe unoda kuisa RaspArch pane chako chishandiso kutanga unofanira enda kunotevera chinongedzo kuitira kuti utore mufananidzo weiyo system.
Waita kurodha pasi iwe unogona ikozvino kukwira chifananidzo pane yako SD, izvi tichaita zvinotevera.
Waita izvi izvozvi isu tichaenda kunotevera kuraira kusevha iyo RaspArch mufananidzo:
dd bs=4M if=/ruta/a/rasparch.img of=/dev/sdX conv=fsync
Kuomesa SD yako unogona kushandisa SD Fomati. Iine SD yakamisikidzwa, unofanirwa Vhura Win32 uye woratidza nzira inoenda kuRaspArch uye nekumisikidza kwe SD yako wobva wadzvanya paNyora.
Uye voila, unogona kushandisa RasArch pane yako Raspberry Pi.
Ya akaisa iyo SD mune yako Raspberry Pi iwe unoibatanidza kune simba uye ichatanga kubhowa iyo systemKana izvi zvangoitwa, iwe unozviwana iwe pachiratidziro chekupinda, chiri chinhu chinopfuura chinongedzo mune terminal mode
Pano waenda kutaipa humbowo hwesisitimu huri:
Uye iwe unenge watove watopinda muhurongwa, kuti utange graphical interface unofanirwa kunyora
Uye iyo system ichatanga. Yekutanga iyo iwe unofanirwa kuita kugadzirisa system, iwe unovhura terminal uye unomhanya:
Yakagadziridzwa izvozvi isu tichagadzira mushandisi musystem sezvo tisingakwanise kushandisa Yaourt semidzi.
Kuti tiite izvi tichaita uyu murairo, kwaunenge uchatsiva "mushandisi" nezita rekushandisa iro rauri kuzogadzira.
useradd -m -g users -G audio,lp,optical,storage,video,wheel,games,power,scanner -s /bin/bash usario
Y tinokupa password ne:
Iye zvino kushandisa mushandisi mutsva muchirongwa isu tirikungo nyora:
Ongorora: hazvikurudzirwe kuti utange sisitimu nemushandisi nyowani nekuti ivo vanozove nematambudziko kutanga iyo graphical nharaunda, ivo vanofanirwa kuzviita pamwe nemudzi mushandisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Maitiro ekuisa RaspArch pane yedu Raspberry Pi?
Slimbook inotangisa LinuxCenter: nzvimbo yevanoda Linux